Oge Permian: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị na-alaghachi n'oge Paleozoic n'oge ikpeazụ ya. Ọ gbasara Permian. The Permian bụ oge a na-ewere dị ka nkewa nke a ọnụ ọgụgụ nke geological oge. Ọ bụ oge nke malitere ihe dịka 299 nde afọ gara aga wee kwụsị nde 251 afọ gara aga. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ oge mmụta ụwa nke mere na mbara ala a, strata bụ ndị na-akọwa mmalite na njedebe nke oge a maara nke ọma.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara obodo na ihe niile mere n’oge Permian.
3 Permian ihu igwe
Imaara na mbido na ngwụcha nke usoro ihe ọmụmụ adịghị akara kpamkpam. Ekele site na strata enwere ike ịmata ha afọ ole ha dị. Ngwụcha nke oge Permian akara oke mbibi nke mere n'ụzọ ziri ezi na ụbọchị a. Permian bu ụzọ nwee oge dị ka Carboniferous ma sorokwa ya oge ụfọdụ dịka Triassic.
Aha Permian bụ n'ihi nnukwu nkwụnye ego buru ibu dị na mpaghara Perm na Russia. Mmiri ndị a chọtara bụ strata na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ihe ngosi mmiri dị omimi.
N'ime oge a niile enwere mgbanwe mgbanwe ihu igwe na mbara ụwa nke nwere nnukwu mkpa. Omume izugbe ahụ sitere na ihu igwe nke ebe okpomọkụ wee daba ọnọdụ nkụ na mmiri na-akpọnwụ. N'ihi ya, enwere ike ịsị na ọnọdụ nke okpomọkụ n'oge a bụ ịbawanye. N'oge Permian enwere mkpịsị nke apiti mmiri na mmiri mmiri niile.
Otutu n'ime osisi fern na amphibians nke choro ka iru mmiri karia malitere iweghachi ha. Na ọ bụrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi adịghị mma oge mgbanwe maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ dị mgbagwoju anya karị. Ferns nwere nkpuru, ihe nākpu akpu, na ihe nākpu akpu bu nke ketara uwa.
Glaciers dị adị n'oge Carboniferous adịworị na mpaghara polar dị na ndịda nke Gondwana. N'ihi mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, glaciers ndị a na-alaghachi n'akụkụ Permian. N'ime oge a enwere ike ịmepụta Hercynian orogeny ekele maka ọkwa dị elu nke ọrụ ala. Ka tectonic plate ndị ahụ na-agagharị n’ụzọ siri ike karị, orogeny a nwere ike ịmalite, nke dugara na nguzobe nke nnukwu kọntinent a na-akpọ Pangea.
Mgbe oge a malitere, ụwa anyị ka na-ata ahụhụ ikpeazụ site na glaciation. Nke a putara na akuku ice juputara na mpaghara Polar nile. Oke osimiri n'oge Permian dịkarị ala. Njikọ dị n'etiti Siberia na Eastern Europe dị adị n'oge niile Ural ugwu ihe mepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikọ zuru oke nke kọntinent dum a na-akpọ Pangea.
Na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia anyị na-ahụ naanị nnukwu ala buru ibu nke kewapụrụ na ndị ọzọ ma ga-adị otu a n'oge Mesozoic. Pangea dị na Equator ma ọ gbatịpụrụ na okporo osisi ya na mmetụta kwekọrọ na ya ma ọ bụ n'oké osimiri. N'oge a na geological oge enwere oke osimiri a na-akpọ Panthalassa. A na-ahụta oke osimiri a “oke osimiri ụwa dum.” Enwekwara oke osimiri Paleo Tethys, nke dị n'etiti Asia na Gondwana. Ejiri kọntinent nke Cimmeria kpụọ site na mkpọpụ dị n'etiti Gondwna na ịsọga na mgbago ugwu. Nke a dugara na njedebe nke oke osimiri Paleo Tethys. Nke a bụ otu oke osimiri si etolite na njedebe nke anyanwụ a maara dị ka Osimiri Tethys nke ga-achịkwa ọtụtụ Mesozoic.
Permian ihu igwe
N'ihi mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, enwere ọtụtụ mpaghara kọntinent nke kere oke ugwu nwere oke ọdịiche dị oke n'etiti okpomọkụ na oyi. Mpaghara ndị putara maka ihu igwe oyi ha bụ ihe anyị na-akpọ taa ihu igwe. N'ime igwe ndị a, e nwere ọnọdụ udu mmiri na mmiri ozuzo nke oge.
N'aka nke ọzọ, na mpaghara ebe ihu igwe ha pụtara maka inwe okpomọkụ dị elu anyị na-ahụ ọzara jupụtara ebe niile. Ọnọdụ drier dị ka ndọtị na obosara na nkesa nke mgbatị ahụ. Ndị a bụ osisi nwere mkpụrụ dị na mkpuchi mkpuchi nwere oke oke nlanarị na ọnọdụ nkụ. Osisi dika Tehran nke fern kwesiri i ghasa gbasaa ha ma nwekwaa ochicho di elu.
Osisi nwere ike gbatịkwuo n'oge ihu igwe Permian ha bụ conifers, ginkgoes na cycads. Oké osimiri n'ozuzu ya dịtụ ntakịrị. Nke a kpatara na ihe dị iche iche dị na mpaghara ụsọ mmiri dị obere site na njikọ nke ihe niile nnukwu kọntinent ndị dị n'otu kọntinent.
Ihe kpatara nke a g’eme ka otu esi kpochapu umu anumanu di na njedebe oge a. Isi ihe kpatara ya bụ mbelata dị ukwuu nke mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri nwere ọkwa dị ala dị ala nke ọtụtụ ihe ndị dị n'ụsọ mmiri na-ahọrọ ibi na ịchọta nri.
N'ihi na e guzobere ugwu dị mkpa dị ka onye Hercynian nyere aka kwado ọdịiche ihu igwe dị na mbara ụwa niile. E mekwara ọtụtụ ihe mgbochi mpaghara, na-eme ka ugwu ndị ahụ e guzobere ọhụrụ na-akwado nhọpụta nke ihu igwe pụrụ iche. Banyere mpaghara Polar, ha ka bụ mpaghara oyi na-atụ ma ebe ndị ikuku na-ekpo ọkụ dị ọkụ.
Fagbọ mmiri ahụ yiri nke ahụ n'oge Devonian na Carboniferous belụsọ maka ọtụtụ ụdị nje ndị nwụrụ na mkpochapụ dị ukwuu. E nwere mmalite dị elu nke ụmụ ahụhụ na-ele anya n'oge a. Nchoputa mmiri nke achọtara site na mmiri nke Permian bara ọgaranya na fosil nke brachiopods, echinoderms na mollusks.
Phytoplankton nwere acritarcos ma kwụsie ike ọ bụ ezie na enweghị ike iweghachite ya tupu oke mbibi nke njedebe nke Devónico. Ndị kacha gbasaa bụ ammonoids na nnukwu ndị nnọchi anya nke nautiloids pụtara. Groupsdị azụ mbụ nke ochie dịworịị dị ka placoderms na ostracoderms pụtakwara.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Permian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Permian